I-Nextcloud Hub 20 ifika nokuthuthuka kokuhlanganiswa, ukwenziwa ngcono nokuningi | Kusuka kuLinux
I-Nextcloud Hub 20 ifika nokuthuthuka kokuhlanganiswa, ukwenziwa ngcono nokuningi
Okuhle | | Aplicaciones, Kunconyiwe
Ukwethulwa kwe- inguqulo entsha yesikhulumi I-Nextcloud Hub 20, version lapho bathuthukise ukuhlanganiswa namapulatifomu ahlukahlukene (I-Slack, i-MS Online Office Server, i-SharePoint, i-MS Teams, i-Jira, phakathi kwabanye), ngaphezu kwalokho kuthuthukiswa okunye ukusebenziseka kokunye nokuningi kuqokonyisiwe.
Kulabo abangayazi i-Nextcloud Hub, kufanele bakwazi lokho le yipulatifomu enikeza isisombululo esizimele sokuhlela ukusebenzisana phakathi kwabasebenzi bezinkampani namaqembu athuthukisa amaphrojekthi ahlukahlukene.
Ngasikhathi sinye I-Nextcloud inesikhulumi samafu esikuvumela ukuthi wandise ukuvumelanisa kokusekelwa nokushintshaniswa kwedatha, okunikeza amandla okubuka nokuguqula idatha kusuka kunoma iyiphi idivayisi noma yikuphi kunethiwekhi (usebenzisa i-web interface noma i-WebDAV). Iseva ye-Nextcloud ingasetshenziswa kunoma yikuphi ukusingathwa okusekela imibhalo ye-PHP futhi kunikeze ukufinyelela ku-SQLite, MariaDB / MySQL, noma i-PostgreSQL.
Mayelana nemisebenzi, i-Nextcloud Hub ibukeka njenge-Google Amadokhumenti ne-Microsoft 365, kepha ikuvumela ukuthi usebenzise ingqalasizinda yokubambisana elawulwa ngokuphelele esebenza kumaseva akho futhi engaboshelwe kumasevisi wefu wangaphandle.
Izindaba eziyinhloko ze-Nextcloud Hub 20
Kulolu hlelo olusha umsebenzi wenziwe ukwenza ngcono ukuhlanganiswa namapulatifomu avela eceleni, bobabili abanikazi (I-Slack, i-MS Online Office Server, i-SharePoint, i-MS Teams, i-Jira ne-Github) njengomthombo ovulekile (IMatrix, iGitlab, iZammad, iMoodle). Ukuhlanganiswa, Kusetshenziswa i-Open Collaboration Services open REST API, idalelwe ukuhlela ukusebenzisana phakathi kwamapulatifomu ukusebenzisana nokuqukethwe. Izinhlobo ezintathu zokuhlanganiswa ziphakanyisiwe:
Amasango phakathi kwezingxoxo ze-Nextcloud Talk nezinsizakalo ezinjengeMicrosoft Teams, Slack, Matrix, IRC, XMPP, neSteam.
Olunye ushintsho olubalulekile kule nguqulo entsha yi- usesho oluhlangene ukumboza amasistimu wangaphandle wokulandela umkhondo wesiphazamisi (iJira, iZammad), amapulatifomu entuthuko abambisanayo (iGithub, iGitlab), amasistimu okufunda (i-Moodle), izinkundla (i-Discourse, i-Reddit) namanethiwekhi okuxhumana nabantu (i-Twitter, iMastodon);
Shayela abalawuli kusuka kuzinhlelo zokusebenza zangaphandle nezinsizakalo zewebhu.
Uhlelo lokusesha luhlanganisiwe, luvumela endaweni eyodwa ukubona imiphumela yosesho hhayi kuphela ezintweni ze-Nextcloud (Amafayela, i-Talk, Ikhalenda, Oxhumana Nabo, Ideski, Imeyili), kodwa futhi nezinsizakalo zangaphandle ezifana neGitHub, Gitlab, UJira neNkulumo.
Futhi kuhlongozwe ideshibhodi entsha, lapho ungabeka khona amawijethi nemibhalo evulekile ngqo ngaphandle kokubiza izinhlelo zokusebenza zangaphandle. Amawijethi ahlinzeka ngezindlela zokuhlanganisa nezinsizakalo zangaphandle ezifana ne-Twitter, i-Jira, i-GitHub, i-Gitlab, i-Moodle, i-Reddit, ne-Zammad, isimo sokubuka, ukubonisa izibikezelo zesimo sezulu, ukubonisa izintandokazi, uhlu lwezingxoxo, ama-imeyili abalulekile, imicimbi yekhalenda, imisebenzi , amanothi nokuhlaziywa.
Ku-Talk ungeze ukusekelwa kokubhekisela kwamanye amapulatifomu. Isibonelo, amakamelo okuxoxa manje angaxhuma esiteshini esisodwa noma eziningi ku-Matrix, IRC, Slack, Amaqembu e-Microsoft. Futhi, Khuluma inikeza isikhombimsebenzisi sokukhetha i-emojis, hlola kuqala ukulanda, izilungiselelo zekhamera neze-microphone, zulazula uye kumlayezo woqobo uma uchofoza ikhotheshini, futhi uthulise ababambiqhaza usebenzisa umphathi. Amamojuli anikezwa ukuhlanganisa ukukhuluma ngedeshibhodi nokusesha okuhlanganisiwe.
Futhi kungezwe ikhono lokunquma isimo sabo, lapho abanye bengathola khona ukuthi umsebenzisi wenzani okwamanje.
Ikhalenda labahleli manje selinokubukwa kohlu lwemicimbi, ukwakheka kwahlelwa kabusha futhi kwengezwa amamojula wokuhlanganiswa kwedeshibhodi nokusesha okuhlanganisiwe.
Ku-interface yokusebenza nge-imeyili, imodi yokubonisa yengxoxo efana nentambo yenziwe, ukuphathwa kwezikhala zamagama ku-IMAP kwathuthukiswa futhi kwanezelwa amathuluzi ukuphatha ibhokisi leposi.
Ingxenye yokwenziwa kwenqubo yebhizinisi ye-Flow isekela izaziso zohlelo lokusebenza kanye nekhono lokuxhumanisa nezinye izinhlelo zokusebenza zewebhu ngezixhumanisi zewebhu.
Kungezwe ukusekelwa kwezixhumanisi eziqonde ngqo kumafayela ku-Nextcloud kusihleli sombhalo.
Imenenja yefayela inikeza amandla okunamathisela izincazelo kuzixhumanisi ezinsizakalweni ezabiwe.
Ukuhlanganiswa ne-Zimbra LDAP sekuqalisiwe futhi kungezwe i-LDAP backend yencwadi yamakheli (ikuvumela ukuthi ubuke iqembu le-LDAP njengencwadi yamakheli).
Uhlelo lokuhlelwa kwamaphrojekthi ophahla luhlinzeka ngedeshibhodi, ukusesha nokuhlanganiswa kwekhalenda (amaphrojekthi angahanjiswa ngefomethi yeCalDAV)
Amandla wokuhlunga anwetshiwe.
Kwenziwa ingxoxo yezindlela ukuhlela amamephu futhi kwengezwa umsebenzi wokufaka kungobo yomlando wonke amamephu.
Izaziso nezenzo ziqoqwe kusikrini esisodwa.
Ekugcineni uma ufuna ukwazi kabanzi ngakho, ungabheka isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Nextcloud Hub 20 ifika nokuthuthuka kokuhlanganiswa, ukwenziwa ngcono nokuningi
IHacktoberfest yonakale yividiyo ye-Youtube